Mashruuca Wacyigalinta Dhalinta Soomaliyeed ee dhibaataysan (SYROP) waa mid loogu talagalay in lagu caawiyo dhalinyarada iyo caruurta Soomaaliyeed ee dhibaatadu ka haysato dhinacyada kala duwan ee dhanqanka, waxbarashada, luuqadda, iyo barbaarinta. Mashruucaani waxa uu ku salysanyahay, u fidinta adeegyo kala duwan oo isukugujira cawinta layliyada (Homework) iskuulka, ka kaalmaymta dhinaca waxbarashada iskuulka (tutoring), iyo dhisida akhlaaqiyaad-ka caruurta Soomaaliyeed ee daggan magaalada Denver iyo agagaar-keeda.
Mashruuca SYROP waxa uu daboolayaa baahidii ay qabeen waalidiinta Soomaliyeed ee daggan Denver iyo agagaarkeeda oo ku saabsanay ilaalinta iyo tarbiyenta ilmahooda. Mashruucu waxa uu caruurta ka qeybqaadata ka caawindoonaa natiijada waxbarashada iskuulka 100-kiiba 70 ama (70%), isla markaana wuxuu ka ilaalindoonaa in ilmuhu iskuulka nacaan ama ka tagaan. Waxaa la filayaa marka mashruucu dhamaado in laga arki doono ilmaha natiijadooda (grade) oo kor u kici doonta hal heer. Taasna waxaa suurtoo-galinaysa qaabka mashruuca SYROP oo ah mid ku jaan-go’an waxbarid, iskaashi, iyo khudbado waano iyo caqli-celin ah oo ilmaha u sahli doonta in ay noqdaan kuwii ka badbaada dhaqan xumada dhulka qalaad ee halista ah.
Qorshaha loogu talo galay mashruuca SYROP guud ahaan waa 2 sano. Wajiga hore (1aad) ee Mashruuca SYROP waxuu bilaamay14-ka bishii Febraayo, 2004-ta , waxaanu uu socondoonaa afarbilood oo ka kooban 150 saacadood isku dar. Waxaa isu diiwaan geshey mashruucaan markii ugu horeysay caruur dhan 20-30. Sidaan soo socota ayuu mashruuca howshiisa loo qoondeeyey in loo fusho. (1) 2 Saacadood oo caruurta laga caawinayo layliyada iskuulka 3 bari asbuuciiba. (2)30 daqiiqadood oo uu macalin waxbarayo ama uu u khudbaynayo caruurta 3 casho asbuucii. (3) 30 daqiiqadood oo cajal muuqaal ah oo ku saabsan maadooyinka xisaabta,syniska, iyo afka Soomaaliga oo ladaawadsiinayo caruurta, 3-casho asbuuciiba. Iskudar saacadaha mashruucu uu furanyahay waa 3 saacadood oo ah maalmaha Isniinta, Arbacad, iyo Jimcaha.